निर्वाचनको तयारीका विषयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र प्रहरीसँग छलफल – इन्सेक
निर्वाचनको तयारीका विषयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र प्रहरीसँग छलफल
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति लिएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश, कार्यालय सुर्खेतको टोलीले निर्वाचनको तयारीका विषयमा सुर्खेतस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृत डा. राजेन्द्र कुमार आचार्यसँग भेटघाट गरेको छ ।
इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीको नेतृत्वमा गएको टोलीले बैशाख २३ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेको हो ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत आचार्यले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनका घटनाको गुनासो छिटफुट रुपमा आउने गरेको बताउनुभयो । हालसम्म लिखित रुपमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर १ बाट मात्रै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित उजुरी आएको र बाँकी मौखिक रुपमा गुनासो आउने गरेको बताउनुभयो ।
उक्त विकास निर्माणको कामलाई रोक्न तत्काल निर्देशन दिएको र मौखिम रुपमा आएका सवै उजुरी तत्काल समाधान गर्ने गरेको उहाँको भनाई थियो ।
त्यस्तै, सुर्खेतस्थित राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनलाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै स्वंयम दलहरुबाटै आचारसंहिता उल्ंलङ्घनका घटना भएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलका क्रममा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो आचरण सुधार गनुपर्ने र निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलहरूले महिला उम्मेदवार संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मकमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मनोनयन दर्ताका क्रममा समेत महिला उम्मेदवारहरू अनविज्ञ प्रकट गरेको भन्दै कतिपय मनोनयन रद्ध भएको उहाँको भनाई छ ।
त्यसैगरी, इन्सेकको टोलीले कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख (एसएसपी) राजेशनाथ बास्तोलासँग समेत निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिका विषयमा छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा निमित्त प्रमुख बास्तोलाले भौगोलिक विकटताले कर्णालीको शान्ती सुरक्षामा चुनौती थपेको भएपनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अधिकतम प्रयास गरेको बताउनुभयो ।
एकै चरणमा हुने निर्वाचन भएकाले प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्ति विगतको भन्दा कार्यालय व्यवस्थापनमा कम र निर्वाचनमा अधिकतम परिचालन गरेको बताउनुभयो । मतदान केन्द्रको संवेदनशीलताको आधारमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन भएको उहाँको भनाई छ ।
मतदान केन्द्रमा मतपेटिका र मतपत्र पठाउन भन्दा पनि मतदान पछि मतगणनास्थलसम्म ल्याउन चुनौती रहेको उहाँको आंकलन छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत डा. आचार्य र प्रदेश प्रहरी निमित्त प्रमुख (एसएसपी) बास्तोलालाई इन्सेक प्रदेश संयोजक सुवेदीले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ समेत हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
यता, इन्सेक प्रदेश संयोजक सुवेदीले कर्णालीमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि दश वटै जिल्लामा इन्सेकको तर्फबाट २५ जना खटिने जानकारी गराउनुभयो । मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना कम गर्न राज्य र गैरराज्य पक्ष एक भएर लाग्नुपर्ने संयोजक सुवेदीले बताउनुभयो ।